ရစ်ဝဲနေတယ် – Hlataw.com
သဲ ရောက်တော့မယ်…. ကို က အသာလှုပ်နှိုးတော့မှ မိမိ ခါးလေး မတ်လိုက်သည်။ အပြင်ဘက် ကြည့်မိတော့ တရိပ် ရိပ်ပြေးနေသော သစ်ပင် တောင်ကုန်းများကို တွေ့နေရသည်။ ”အင်း” ရှုပ်ပွနေသော ဆံပင် ကိုသပ် တွန့်နေသော အင်္ကျီကို အသာဆွဲချလို့ မိမိတို့ နှစ်ယောက်အပေါ် ခြုံထားသော စောင် ကိုလည်း ဆွဲဖယ်ခေါက်သိမ်းသည်။ ”ကို ညက အရမ်းဆိုးတာပဲ” ”သဲ ကလည်းကွာ ချစ်လို့ပေါ့” ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ်က မိမိပါးလေးကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းသည်။ ”တော်ပါ” ချောင်းသာသို့ ရောက်ခါနီးလို့ လမ်းတွေက အကွေ့အကောက် ပိုများလာသည်ထင်သည်။ကားကြီးက လှုပ်ရမ်းနေသည်။မိမိတို့ ရှေ့ခုံက လင်မယားနှစ်ယောက်တော့ အိပ်ပျော်နေသေးလားမသိ။တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်။ ”ဟိုနှစ်ယောက်တော့ အိပ် ကောင်းနေတယ် ထင်တယ် ကို ဟင်း ဟင်း” ”အိမ်မှာ မအိပ်ရဘူးထင်တယ် သဲ ရ” ကို့ ပုခုံးလေးကို မှီလိုက်တော့ လက်တစ်ဖက်က မိမိကို အလိုက်သင့် ထွေးပွေ့သည်။
မိမိ တို့ နှစ်ယောက် အလုပ်များ မအားသည့်ကြားမှ ကို က အပန်းဖြေခရီးထွက်ရအောင်ဆိုပြီး မဖြစ်မနေ စီစဉ်၍ အခုလို ရောက်ဖြစ်ခြင်းပင်။အိမ်ကိုတော့ ဟို လင်မယားနှစ်ယောက်က အတိုင်အဖောက်ညီညီ ပြောပေးလို့ အဆင်ပြေသွားသည်။”ကိုပြည့်” နှင့် ”ဆု” တို့က မိမိ နှင့် ငယ် သူငယ်ချုင်းတွေ။သူတို့ နှစ်ယောက် ရည်းစားသက်တမ်း နှစ် နစ် အကြာတွင် ယူလိုက်ကြသည်။ အခု အိမ်ထောင်သက် ခြောက်လ ကျော် သည်အထိ ”ဆု”က မိမိကို တိုင်တိုင်ပင်ပင်နှင့် သူတို့ အကြောင်းတွေ ပြောပြသည်။”ကို” ကတော့ ကိုပြည့် သူငယ်ချင်းလေ။”ဆု”တို့ သမီးရည်းစား ဘဝ ကတည်းက ”ဆု”က အဖော် အဖြစ် မိမိကို ခေါ်သလို ”ကိုပြည့်”ကလည်း သူငယ်ချင်း ”ကို့” ကို ခေါ်ခေါ်လာသည်။ကြာတော့လည်း အောင်သွယ်ချင်း ညိကြသည်ပေါ့။”ကို”က အင်ဂျင်နီယာ မိမိက လည်း အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတော့ အယူအဆတူ ဝါသနာတူချင်း ဆုံကြတော့ ချစ်လိုက်ရတာ။သွားအတူ လာအတူ ။
နောက်ဆုံး ကို….က အဆင့်တွေ ကျော်လာတော့လည်း မိမိ လိုက်လျောမိသည်။ ”ကို”နဲ့ ရည်းစား ဖြစ်တာ အခုဆို တစ်နှစ်ကျော်ပြီလေ။ ”သဲ ဘာတွေ တွေးနေလည်း” ”ဟင့်အင်း ဒီလိုပါပဲ”နေပူထဲ အထုပ်ဆွဲပြီး ဟိုသွား ဒီသွား သွားရတာများလာတော့ ချွေး တွေပြန်ပြီး မောလာသည်။လူများရက်မို့လားမသိ။ဟိုတယ်တွေက အခန်းတွေ ရှိပေမယ့် သီးသန့် နှစ်ယောက်ခန်းတွေက လူပြည့်နေတာများသည်။ကြိုပြီး ဘိုကင် လုပ်ထားလိုက်ရင် အကောင်းသား။ ”ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်” ”ရှိမှာပါ ” ”လိုတာ မရှိတော့လည်း ရှိသလိုပေါ့ကွာ” ကိုပြည့်ပြောတော့ ဆု ကပါ ခေါင်းညိမ့်သည်။ ကမ်းခြေသို့ မျက်နှာမူနေသည့် ”ရွှေစည်းစိမ်”ဟိုတယ် မှာ ဝင်မေးဖြစ်တော့လည်း နှစ်ယောက်ခန်းတွေက ပြည့်နေပြန်သည်။ဒါပေမယ့် အပေါ်ဆုံးထပ် မှာတော့ လေးယောက်ခန်း ခုတင်နှစ်လုံးပါ တစ်ခန်းရမည်ဟုပြောသည်။ ”ဘယ်လိုလဲ” ကိုပြည့်က မိမိတို့ဘက်လှည့်၍ မေးသည်။
မရတဲ့ အဆုံး ဒီလိုပဲ နေရမှာပေါ့ ဆု နဲ့ သဲ ရော ဘယ်လို သဘောရလဲ ကို က မိမိ နှင့် ဆု ဘက် လှည့်၍ မေးသည်။ ”ရပါတယ် ဆုက တို့တွေ သိုက်သိုက်ဝန်းရှိတာပေါ့ သဲ ကိုသာ အားနာတာ သူ့ ကိုကို နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လားမသိ” အခြေအနေ က မိမိ ဘက်လှည့်လာသည်။ ”ကိစ္စ မရှိဘူး ကို တို့ သဘောပါနော် သဲ ကတော့ လောလောဆယ် နားချင်တာပဲ သိတယ်” ဒီလိုနဲ့ အခန်းယူဖြစ်သည်။လေးရက်စာ။အခန်းခ နှင့် ကျသမျှ အားလုံး တစ်တွဲ တစ်ဝက် ဆီကျခံဖို့ အရင်ကတည်းက တိုင်ပင်ပြီးသား။ အခန်းထဲရောက်တော့ အထုပ်တွေချ ခုတင်ပေါ်ထိုင်ရင်း အခန်းအနေအထားကို လေ့လာဖြစ်သည်။နှစ်ယောက်အိပ် ခုတင်နှလုံးက ဘေးချင်းယှဉ်လျက် ကမ်းခြေဘက်သို့ ခေါင်းပေးထားသည်။ခုတင်ခြေရင်းတွင် ဗီရို နှစ်လုံး ပစ္စည်းများတင်ရန် ခုံပုလေးတွေ ရှိပြီး နောက်ဘက်ရှိ တံခါးမှတဆင့် ရေချိုးခန်း အိမ်သာသို့ သွားနိုင်သည်။
မိမိ ခုတင် ခေါင်းရင်းရှိ ပြတင်းတံခါး ဖွင့်လိုက်ပြီး ကမ်းခြေနှင့် အဆုံးအစ မရှိ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ”သဲ ကိုတို့ အဝတ်အစား လဲရအောင် ပြီး ရင် ရေသွားဆော့မယ်” ကိုက ပုခုံးလေးပုတ်၍ ပြောသည်။ ”အင်း” မိမိ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုက ရွှတ်ခနဲ နမ်းပြန်သည်။ ”ကိုနော် ဟိုနှစ်ယောက် ရှိတာ တော်တော်ကဲနေ” ”အယ် ဟိုနှစ်ယောက်ရော” ”အဝတ်တွေယူပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်လေ ရေချိုး အဝတ်လဲမှာပေါ့ ရေချိုးခန်းက အကျယ်ကြီး သဲရဲ့” ကို က ပြောပြောဆိုဆို အဝတ်အစားလဲဖို့ လုပ်နေသည်။ မိမိ အဝတ်အစားလဲဖို့ ချီတုန်ချတုန်ဖြစ်နေသည်။ ကိုနဲ့ အရင်းနှီးဆုံး အခြေအနေ ဆိုပေမယ့် ရှက်သလိုလို ချည်း ဖြစ်နေသည်။ မိမိ ဝတ်လို့ အဆင်ပြေမည် ဆိုတာလေးတွေ ရွေးလိုက်သည်။ ”ကို ဟိုဘက်လှည့်” ”ဟာဟ” ကို လှည့်သွားတော့မှ မိမိ အပေါ် အင်္ကျီ ချွတ်လိုက်သည်။လတ်ဆတ်သောလေ နှင့် အဆုံးအဆမရှိသော ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို မျက်နှာမူ၍ မိမိ လက်များ ဆန့်တန်းထားမိသည်။
ရင်ထဲက သောကတွေ ပြေငြိမ်းသွားပြီး လူတကိုယ်လုံးပေါ့ပါး လန်းဆန်းသွားသလိုပါ။မိမိခါးလေးကို နောက်မှ သိုင်းဖက်တာခံလိုက်ရပြီး စိုစွတ် အေးမြသော ခန္ဒာက နောက်ဘက်မှ ထိကပ်လာသည်။ကို က မိမိ ထက် အရပ်ရှည်သည်လေ။မိမိမော့ကြည့်လိုက်တော့ ကို က နဖူးလေး နမ်းသည်။ ”လုပ်ပြန်ပြီ လူတွေ ရှိပါတယ်ဆို ” ”သဲ ကလည်းကွာ ဒါရှက်စရာလား” ကို က တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလို့ မာကျောကျော အရာက မိမိ ခါးအောက်လာထိသည်။ ”ကိုနော် မဟုတ်တာတွေ စဉ်းစားနေတယ်မလား” ”ဟားဟား မဟုတ်ပါဘူးကွာ သဲကလည်း” ”ဟိတ် အကြည်ဆိုက် နေတယ်ပေါ့ ” ဟို နှစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ဆုက ဂျင်းပင် အတိုလေး ဝတ်ထားလို့ ပြည့်တင်းသော ပေါင်သားတွေမှာ သဲမှုန့်များပေကျန်နေသည်။ ကိုပြည့်ကိုတော့ မိမိ သေချာ မကြည့်ရဲပါ။အပေါ် အဝတ်ဗလာနှင့် ဘောင်းဘီတို က ရေစိုထားတာမို့ ကိုပြည့်ကို စကားပြောလျှင် မိမိ ခေါင်းလွဲ ထားမိသည်။
ကိုက အရပ်ရှည်ပေမယ့် အသားဖြူသည်။ကိုပြည့်ကတော့ အသားညိုညို တောင့်တောင့်တင်းတင်း ရှိသည်။ ”တို့ပြန်နှင့်မယ်လေ” ကိုပြည့်ကပြောတော့ ကိုက ခေါင်းညိမ့်သည်။ ”အေး ငါတို့ နည်းနည်း နေစောင်းမှ လာမယ်ကွာ” ”သဲ ရော အေးဆေးပဲမလား” ”အင်း” သူတို့နှစ်ယောက် ထွက်သွားမှ ကိုက တိုးတိုးလေးပြောသည်”သဲ ပျော်လား” ”အင်း” ကိုက ပို၍ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထွေးပွေ့သည်။ ”ချစ်ချင်ပြီကွာ” ”ကို နော် တအားမဆိုးနဲ့ ဟိုနှစ်ယောက်လည်းရှိတာကို ” ”ရှိ ရှိ ပေါ့ သူတို့ ဘာ သူတို့ မိုးမမြင် လေမမြင် ဖြစ်နေတာ” ”တော်ပါ” ကို က ပြောပြောဆိုဆို ပွေ့ယူလိုက်၍ မိမိ မြောက်သွားသည်။ပြီးတော့ လှိုင်းများပုတ်ခတ်နေသော ပင်လယ်ဆီသို့ မိမိကို ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ကိုနှင့်အတူ ကမ်းခြေတလျှောက် ပြေးလွှားနေတာ မိမိ မောသည်ဟုမထင်ပါ။ချစ်လိုက်ရတာ ကိုရယ်။ ညနေ စောင်းခါနီးမှ မိမိတို့ ပြန်တက်ကြသည်။ ရေထဲ ဆင်းနေတုန်းက မသိသာပေမယ့် ကမ်းပေါ်မှာတော့ လေတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ချမ်းလာသည်။
ကိုက ပါလာသော သဘက်လေးအားမိမိကို လွှမ်းခြုံပေးရင်း ”သဲ ကို အကုန် စားကြဖို့ တခုခု သွားဝယ်ဦးမယ်။ချမ်းနေတယ်ဆိုတော့ မလိုက်နဲ့တော့လေ။တက်သွားနှင့်နော်” မိမိ ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ရင်း အခန်းသို့တက်ခဲ့သည်။ အခန်းသို့ရောက်တော့ တံခါးခေါက်ကြည့်သည်။အထဲမှ ဘာမှ အသံမကြား။တံခါးလက်ကိုင်ကို အသာလှည့်၍ ဖွင့်လိုက်တော့ ဂျက် ချမထားသဖြင့် မိမိဝင်လာလိုက်သည်။အခန်းထဲမှာတော့ ဘယ်သူမှမတွေ့။ဆုတို့ ဘယ်များသွားပါလိမ့်။တံခါးကြီးလည်း ဖွင့်ထားသည်။မိမိခြုံထားသော သဘက်ကို ခုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည်။ အမှတ်တမဲ့ ရေချိုးခန်းဆီမှ အသံတခုခု ကြားလိုက်ရသလိုလို။တကိုယ်လုံးထူပူသွားသည်။ခုနက ချမ်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးက မသိမသာ ကြက်သီးများထလာသည်။အခြေအနေတခုကို မိမိ နားလည်လိုက်သလို။မရည်ရွယ်ပါပဲနှင့် မိမိခြေလှမ်းများ ရေချိုးခန်း တံခါးဝသို့ရောက်သွားသည်။
တံခါးတဖက်က မသိမသာဟနေသည် ”အား အင်း အင်း အင်း” ဆုရဲ့ ငြီးတွားသံတွေ ကြားနေရပေမယ့် မိမိမြင်နေရသည်က ကိုပြည့်၏ ကျောပြင်ကြီးနှင့်တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေသော ခါးအောက်ပိုင်း။ရေကန်လေးနှုတ်ခမ်းပေါ် လက်ကလေးထောက်၍တအင်းအင်းနှင့် ငြီးနေသော ဆုရဲ့ တင်နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်ပြီး ကိုပြည့် လှုပ်ရှားနေသည်။မိမိ လက်ကလေးများက တံခါးအပေါ်တွင် တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ချွေးတွေလား ရေတွေလား မသိသော စိုစွတ်မှုများက ကိုပြည့်၏ ကျော ခါး တင်ပါး တလျှောက် စီးပိုးနေသည်။မိမိ ဆက်လက်မကြည့်လိုတော့ပါ။ကြာလျှင် ယိုင်လဲသွားမှာစိုးသည့်အတွက် အသာပင် ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ခုတင်ပေါ်သို့ ခြေပစ် လက်ပစ် ထိုင်ချမိသည်။တကိုယ်လုံးက အခုထိ တုန်ရီနေတုန်းပင်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကိုပြည့်၏ လှုပ်ရှားမှုတွေက မျက်စိထဲက မထွက်ဖြစ်နေသည်။တစ်ချိန်ထဲမှာ အပြစ်ရှိသလိုလို ခံစားနေမိသည်။
ခဏကြာတော့ ကိုရောက်လာသည် ”သဲ ရေမချိုးသေးဘူးလား” ”ဟင့်အင်း ဆုတို့ချိုးနေတယ်” ”အင် သူတို့ကလည်း ပြန်ရောက်တာဖြင့် နေ့လည်ကတည်းကကို” ”အင်း” လက်ထဲက အထုပ်တွေ ချလို့ ကို မိမိနားလာထိုင်သည်။ ”သဲ မျက်နှာကြည့်ရတာ တမျိုးကြီးပဲ” ”ဟင့်အင်းဘာမှ မဖြစ်ဘူး” ခဏနေတော့ ဆုတို့ထွက်လာသည်။ ”ဟဲ့ ဘယ်တုန်းက ရောက်နေကြတာတုန်း” ”အခုလေးတင်ပဲဟ” ကိုပြည့်ကိုတော့ မိမိ မျက်နှာလွှဲထားမိသည်။ ”မင်းတို့ရေချိုးလေ ငါတို့ အပြင်သွားဦးမယ်” ကိုပြည့်က ပြောပြီး ပြင်ဆင်နေသည်။ကိုက လှမ်းပြောသည်။ ”စားဖို့တော့ ငါဝယ်လာတယ် ငပြည့်ရ” ”အေးကွ ဒီမှာ ဆုလေ လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့” မိမိ ညဝတ် ရန် အဝတ်တချို့ယူပြီး ရေချိုးခန်းသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ရေချိုးခန်း တံခါးပိတ်ပြီး မိမိ အကျီရော ဘရာစီယာ ရော ချွတ်ပစ်လိုက်လိုက်သည်။ခန္ဓာကိုယ်မှာက သဲတွေချည်းပင်။ရေပန်းဖွင့်၍ ရေအောက်သို့ဝင်သည် ”လှတယ်ကွာ” အသံကြားမှ သဲ သတိထားမိသည်။
အယ် ကို မကောင်းဘူးကွာ မိမိ လက်ကလေးများ ရင်ပေါ်သို့ ယှက်ထားမိသည်။ ”တူတူချိုးမလို့” ကိုက ဘောင်းဘီပါ ချွတ်လိုက်၍ မိမိဆီ တိုးကပ်လာသည်။မိမိကို ထွေးပိုက်လိုက်တော့ အလိုက်တသိပင် ပြန်လည် ဖက်ထားလိုက်မိသည်။ခုနက ရေပန်းထဲမှာမို့ သေချာမမြင်လိုက်မိတဲ့ ကို့ အချောင်းကြီးက မိမိဝမ်းဗိုက်ကို လာထောက်သည်။ ကိုက မိမိကို ရေပန်း အပြင်ဘက်သို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်။မိမိ၏ မျက်နှာလေးကို တယုတယ ဆွဲမလိုက်စဉ်၌ပင် ကို့ နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်မိသည်။ခုနက လိုက်ဖိုရင်တုန်မှုတွေက ပြန်ရောက်လာသည်။ကိုက မိမိ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်ယူသည်။မိမိကတော့ ကို့ရဲ့ လျှာလေးကို စုပ်စုပ်ပေးမိသည်။တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျောပြင်တွေ ရင်သားတွေကို ဆုပ်နယ်ရင်း ကို့ရဲ့ လက်တွေက မိမိ စကပ်ကို ဆွဲချွတ်နေသည်။အောက်က ပင်တီလေးပါ ပေါင်ဝက်လောက်ကျွတ်သွားချိန်မှာ ကိုက ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး မိမိ စီးခုံစပ်နှင့် အက်ကွဲကြောင်းထိပ်လေးကို နမ်းရှိုက်ပေးသည်။
မိမိ၏ တင်နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်နယ်လို့ နမ်းရှိုက်နေသော ကို့ခေါင်းလေးကို ကိုင်ရင်း ရုတ်တရက် မျက်စိထဲ ခုနက က မြင်ကွင်းတွေက ပြန်ပေါ်လာသည်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကို့ခေါင်းလေးကိုသာ အတင်းဆုပ်နယ်နေမိတော့သည်။ ”အား အားး ကို” မိမိ ခရီး အဆုံး ရောက်တော့မည်ဆိုတာသိလို့ ကို့ကို အတင်းဆွဲထူလိုက်သည်။ ကိုက အလိုက်တသိပင် မိမိကို နံရံ၌ ကပ်စေပြီး ခြေထောက်တဖက်ဆွဲမ၍ သူ့ဟာကို တေ့ထည့်လိုက်သည်။ ”အင်း” ကို့ ပုခုံးကို တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားမိပြီး တနင့်နင့် ဝင်လာသော အရာတခုကို လှိုက်မောစွာ ခံစားမိသည်။ကိုက မှန်မှန်နှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်ပေးနေသည်။ ”အား ကောင်းလိုက်တာ သဲ ရယ်” မိမိလည်း မျက်လုံးများမှိတ်ထားမိသည်။ကို့ လက်တွေက ရင်သားတွေကို ဖျစ်ညှစ်နေသည်။ပါးလေးများ နှုတ်ခမ်းလေးများကိုလည်း နမ်းသည်။မိမိလည်း ကို့ လည်တိုင်လေးတွေ ပုခုံးသားလေးတွေကို ငုံ့နမ်းမိသည်။ကို့ လှုပ်ရှားမှုတွေက မြန်ဆန်လာသည်။
နင့်ခနဲ နင့်ခနဲ နေပေမယ့် လှိုင်းစီးနေရသလိုလို။ ”ချစ်တယ် ကိုရယ်” မိမိ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ပြီးသွားမှန်းမသိတော့ပါ။ကိုကတော့ အားကုန်သွန်နေတုန်းပင်။မိမိလည်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖြစ် ကို့ အလှုပ်အရှားတွေကိုသာ တောင့်တနေမိတော့သည်။ ဟိုး အဝေးကြီးက ရေလှိုင်းသံတွေ ကြားနေရသည်။နံနက်ခင်းရဲ့ ကျေးငှက်သံတွေကလည်း ပဲ့တင်ထပ်လျက်ရှိသည်။ မိမိ ခြုံလွှမ်းထားသော စောင်ကို ရင်သားများ ပိုမို ဖုံးအုပ်မိစေရန် ဆွဲတင်လိုက်သည်။ကိုကတော့ ဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေသည်။ မိမိ အသာပင် ကို့ကို ကျောပေးလိုက်သည်။ ဟိုတယ်က ပေးထားသည့် ခြင်ထောင်က ပါး၍ ဆန့်ကျင်ဘက် ခုတင်ကို မြင်နေရသည်။ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့ အိပ်မောကျနေသည် ထင်ပါသည်။ ”ဟင်း” မိမိ သက်ပြင်းတစ်ချက် မသိမသာချမိသည်။ညက အဖြစ်ကို ပြန်တွေးရင်း မိမိမျက်နှာများ ပူနွေးလာသည်။ ညက တစ်ညလုံးကာစီးရတာ ပင်ပန်းလို့ ကိုရော မိမိပါ အစောကြီး အိပ်ပျော်သွားသည်။
တရေးနိုးတော့ မိမိနားထဲ၌ အသံတစ်ခုခု ကြားလိုက်ရပြီး ဟိုဘက်ခုတင်က ဆိုတာလည်း သိလိုက်ရသည်။တစ်ခန်းလုံး မီးပိတ်ထားပေမယ့် ဟိုဘက်ခုတင်ဘက်က ညအိပ် မီးလုံး မှ အလင်းရောင် ခပ်ဖျော့ဖျော့က ဇာခြင်ထောင်ကို ထိုးဖောက်၍နေသည်။အလုံးအထည်နှင့် လှုပ်ရှားမှုတွေက မိမိရင်ကို သိမ့်ခနဲဖြစ်စေသည်။ညနေက ပုံရိပ်ကလည်း အစီအရီ ပြန်ပေါ်လာသည်။အခုလည်း ကိုပြည့်က ဆု ၏ နောက်ဘက်မှ နေ၍ အသားကုန် ဆောင့်နေသည်။ဆု၏ အသံတိုးတိုးလေးကို တချက်တချက်ကြားနေရသည်။တော်သေးသည်။မိမိတို့ဘက်က မီးပိတ်ထားလို့။ မသိမသာပင် လက်တွေက ပေါင်ကြားထဲရောက်နေသည်။စိုစွတ်စွတ် ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း ခံစားနေရသည်။ကြည့်နေရင်းနှင့် စိတ်တွေက ဗလောင်ဆူလာသည်။နှိမ့်တုန် မြင့်တုန်ဖြစ်နေသော ရင်ကလေးကို လက်နှင့်ဖိရာမှ မိမိ ရင်သားထိပ်လေးတွေ တင်းနေတာ ခံစားမိလာသည်။ထွက်ပေါက်တစ်ခုခုကို စောင့်ကြိုနေသလိုလို။
ရုတ်တရက် ဟိုဘက်ခုတင်က လှုပ်ရှားသွားသည်။ဆုက အပေါ်ရောက်သွားသည်ကို ရင်သားများ လှုပ်ခါနေခြင်းကြောင့် သိလိုက်ရသည်။ဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန် ဆောင့်နေသော ဆုကို ကြည့်ပြီး မိမိလက်တွေက အက်ကွဲကြောင်းလေးထဲ ပွတ်ဆွဲနေမိသည်။မိမိစိတ်များ ထိန်းမနိုင် ဖြစ်ကုန်သည်။ ကို့ဘက်ကို လှည့်၍ ရင်ချင်းအပ်လိုက်ပြီး ပေါင်ကြားမှ ဟာကြီးကို ပွတ်ဆွဲနေမိသည်။ကို့မျက်နှာတွေ လိုက်နမ်းမိတော့ ကိုမျက်လုံးများပွင့်လာပြီး မိမိကို ဖက်ထားသည်။သို့ပေမယ့် မိမိ အတင်းရုန်း၍ အောက်ဘက်ကို လျှောဆင်းပြီး ဘောင်းဘီကို ဆွဲချသည်။ကို့ဟာက အဆင်သင့်မဖြစ်သေး။မိမိကတော့ ဆန္ဒတွေ ပေါက်ကွဲချင်ပါပြီ။ မိမိ မလျော့မတင်းဖြစ်နေသော ကို့ အချောင်းကြီးကို လှန်တင်လိုက်ပြီး ဥလေးတွေကို လက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ”အာ့” လက်ဖြင့်လည်း ကို့အချောင်းကြီးကို ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်သည်။အရင်းမှ အဖျားထိ လျှာဖြင့်ဆွဲပေးလိုက်တော့ တင်းတောင့်လာသည်။
ထိပ်ဖျားလေိးု လက်မဖြင့်ချေချေပေးသည်။ကို့လက်တွေက မိမိခေါင်းကို ဖိဖိချလာသည်။ရင်သားတွေကိုလည်း ဆုပ်နယ်လာသည်။မှောင်မဲနေပေမယ့် ကို မိမိကို ကြည့်နေမှာသေချာသည်။တခါမှ မိမိ အဲလောက်လိုချင်တက်မက်မှုမရှိခဲ့။ ကို့ အချောင်းကြီးကို လေးငါးခါလောက် စုန်ဆွဲလိုက်တော့ တင်းတောင့်လာသည်။မိမိ ဘောင်းဘီကို မိမိကိုယ်တိုင်ဆွဲချွတ်ပြီး ကို့ ကိုယ်ပေါ် ခွထိုင်လိုက်သည်။ဆန္ဒ တစ်ခု အဆုံးရောက်ဖို့ကလွဲပြီး ဘာမှ မသိတော့။မိမိ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို လက်ထောက်၍ အသာထိုင်ချလိုက်သည်။ ”ဟားးး” ပြီးတော့ အသာပြန်ကြွသည်။မိမိမျက်လုံးလေးများမှိတ်ထားလိုက်သည်။အောက်ဘက်ဆီမှ တစိမ့်စိမ့်ခံစားနေရသော အတွေ့ကိုသာ အာရုံစိုက်ထားမိသည်။ကိုက မိမိ အင်္ကျီကို ချွလိုက်သည်ကို လည်းမိမိ သေချာသတိမထားမိ။သာယာသော အတွေ့များလွတ်ထွက်မသွားရန်သာ အတင်း လှုပ်ရှားနေမိသည်။ကိုက ရင်သားတွေကို အတင်းဆုပ်နယ် ဖျစ်ညစ်နေသည်။
”အင်း ဟင်း အင်း” ကိုကပါ မိမိ ဆောင့်ချက်တွေအားပါလို့ အသံတွေထွက်လာသည်။မိမိမျက်လုံးများထဲမှာ ကို့ရဲ့ ညီတွားသံတွေနဲ့အတူ ကိုပြည့်၏ လှုပ်ရှားမှုတွေက ပေါ်လာသည်။ကိုကပါထပြီး မိမိကိုရင်ချင်းအပ်၍ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး အတင်းထိုးဆောင့်ပေးလာသည်။ကို့ကျောပြင်ကြီးကို အတင်းဖက်ထားပြီး ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်၍ ဆောင့်သွင်းနေမိသည်။မိမိစိတ်ထဲ ကိုပြည့် ကိုပဲ ဖက်ထားရသလိုလို။ ”အား ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်” မိမိ တိုးတိုးလေး ညည်းနေမိသည်။ ကိုက မိမိကို ပက်လက်လှန်ချလိုက်ပြီး ပေါင်တဖက်ဆွဲမ၍ မှောက်ခုံ ဖြစ်သွားအောင်လုပ်သည်။ ”ကုန်းလိုက်ကွာ” မိမိတင်နှစ်ဖက်ကို အသာဆွဲယူသွားပြီး ချက်ချင်းပင် တေ့၍ ထည့်သည်။ အစပထမ က ဖြေးဖြေးချင်း ပေမယ့် နောက်ပိုင်း တွင် ကို အားကုန်ဆောင့်နေသည်။မိမိစိတ်ထဲ ကိုပြည့်၏ လှုပ်ရှားမှုတွေသာ စွဲနေသည်။ကို ရပ်သွားလျှင်ပင် မိမိ ဖင်လေးကို နောက်သို့ပစ်ပစ် ပေးနေမိသည်။
”အားးးး” မိမိပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ဆောင့်သည်။လှိုက်မောလွန်းလှပါသည်။ နောက်မှ ကို သိုင်းဖက်လိုက်တော့မှ မိမိ အတွေးပြတ်သွားသည်။ညက ဘယ်လိုပြီးသွားမှန်းတောင်မသိလိုက်။အခုပြန်သတိရတော့ မိမိကိုယ်ကို ရှက်မိသည်။ကိုယ့်ချစ်သူ ရင်ခွင်ထဲမှနေ၍ တခြား ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ပစ်မှားမိနေသော အဖြစ်ကို တွေးပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။မိမိ က ကာမ စိတ်များသူမဟုတ်ပါ။ခွင့်လွှတ်ပါကိုရယ် သဲ တကယ်ချစ်တာ ကို တစ်ယောက်တည်းပါ။စိတ်ထဲမှ ရေရွတ်ရင်း ကို့ လက်တစ်ဖက်ကို အတင်းဆွဲယူ၍ ပိုမို ထွေးပွေ့စေလိုက်တော့သည်။ဒီနေ့တောာ့ သဲဖြူကျွန်းသို့ သွားဖြစ်ကြသည်။အဲဒိမှာပဲ အုန်းရေသောက် ရေကစားပြီး ဓါတ်ပုံများရိုက်ကြသည်။ကိုက မိမိကို အရမ်း ဂရုစိုက်သောကြောင့် ပျော်ဖို့ကောင်းလှပါသည်။ကိုပြည့်ကို မြင်တိုင်း ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလို ဖြစ်မိပေမယ့် စိတ်ကို လွှတ်မထားလိုက်ပါ။တတ်နိုင်သမျှ မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်နေပါသည်။
ကိုပြည့်ကတော့ ဘာမှ မသိသူပီပီ ပုံမှန်ပင် ဆက်ဆံပါသည်။ တမနက်လုံးရေထဲ ဆင်းနေသောကြောင့် တကိုယ်လုံး ရေတွေရော သဲတွေရော စိုရွှဲနေပါသည်။ချမ်းလာပြီး တုန်တက်လာပါသည်။ကိုက ထွေးပွေ့ထားလို့ တော်သေးသည်။ ”သဲ ချမ်းနေပြီလား” ”အင်း လေကအေးတယ် ကို” ကိုနှင့်အတူ အုန်းသီးတစ်လုံးထဲကို ပိုက်နှစ်ချောင်း အတူ သောက်ရင်း ချစ်စကားများ အများကြီးပြောဖြစ်ကြသည်။စပို့ရှပ် အနီ လက်တို နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အတိုလေးက ရေစိုနေသောကြောင့် မိမိကိုယ်မှာ တွယ်ကပ်နေသည်။ ”သဲ က အရမ်းလှတယ်ကွာ ချစ်ချင်လာပြီ” ”တော်ပါ ဒါပဲ စဉ်းစားနေ” ကို့နဖူးလေးကို လက်လေးဖြင့် အသာထုရင်း ကျီစယ်မိသည်။ကိုပြည့်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း လူရှေ့မရှောင် ကလူကျီစယ်နေကြသည်။ ညနေ တော်တော်စောင်းမှ နောက်ကျပြီး ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ညနေနောက်ကျလေ လူကများတာမို့ စက်လှေ တွေကို လုတက် ကြရသည်။
ဖြစ်ချင်တော့ မိမိနှင့် ကိုပြည့် တက်အပြီး လူပြည့်သွားတာမို့ ကိုနဲ့ ဆုနဲ့ က ကျန်ရစ်သည်။ ”ငါတို့ နောက်တစ်စီးနဲ့ လိုက်လာခဲ့မယ်” ကိုက အော်ပြောသည်။ ”အေး အေး” ကိုပြည့်က မိမိဘေးကပ်ထိုင်ပြီး လိုက်ပါလာသည်။လှေကလူးသောကြောင့် တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့ ပုခုံးကြီးက မိမိအပေါ် လာဖိတော့ ကြက်သီးထမိသည်။ ”ချမ်းနေလား ရောက်တော့မယ်” ”ရတယ် အကို” မိမိစိတ်ထဲမှာ ဇဝီဇဝါ အတွေးတွေက ဝင်လာနေသည်။ကိုပါလာရင် အကောင်းသားလို့လည်း တွေးမိသည်။မိမိမျက်နှာကို သိနေသည့်အလား ကိုပြည့်က ”မပူပါနဲ့ ညီမရယ် နောက်လှေနဲ့ပါလာမှာပဲ” ”ဟုတ်ကဲ့” ဒီဘက်ကို ရောက်လာတော့ မှောင်ရီ ပျိုးစပင် ဖြစ်နေပါသည်။ ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့ ”ညီမ အပေါ်တက်နှင့်လေ အကို ဆု တို့လာမှ တက်လာခဲ့မယ်” ”ဟုတ် အကို” မိမိ လှေကားပေါ် တက်လာခဲ့သည်။တက်လာပြီးမှ ရေစို ကြီးနှင့် တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့သည့် သူ့ကိုလည်း အားနာမိသည်။
ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ဟု စိတ်ထဲ တွေးရင်း ပြန်ဆင်း၍ ခေါ်မိသည်။ ”အကို” ”ဟင်” ”တက်ခဲ့ပါလား အေးနေမှာပေါ့ အဝတ်လဲပြီးမှ ပြန်ဆင်းစောင့်လေ” သူက မိမိကို တစ်ချက်စိုက်ကြည့်ရင်း တက်လိုက်လာသည်။ အခန်းထဲ ရောက်တော့ ရေသုတ်သဘက်ကြီးဆွဲယူရင်း ရေချိုးခန်းဘက်ထွက်လာခဲ့သည်။ ”အကို ပြန်ဆင်းသွားရင် တံခါးစေ့ခဲ့နော်” ”အေး အေး” ရေချိုးခန်းထဲ ရောက်တော့ မိမိလက်တွေ တုန်ရီနေတာကို သတိထားမိသည်။အခုလောက်ဆို သူအပြင်မှာ ဘာလုပ်နေမှာပါလိမ့်။ဝင်လာသော အတွေးတို့ကို ပြန်ထုတ်ပစ်လိုက်ရင်း စပို့ရှပ် အင်္ကျီလေးကို အသာချွတ်လိုက်သည်။သဲ တွေနဲ့မို့ မနည်းချွတ်ယူရသည်။တဆက်တည်း ဂျင်းပင်ရော အောက်ခံ ဘောင်းဘီပါ ချွတ်ချလိုက်သည်။သဲတွေက နေရာတကာမို့ ဖြည်းဖြည်း ချင်း ချွတ်ယူရသည်။ပန်းရောင် ဘော်လီချိတ်ဖြုတ်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ရင်နှစ်မွှာကြားထဲ သဲမှုန့်လေးတွေကြောင့် ဖြူဝင်းသော အသားက နီရောင်အစင်းလေးများဖြစ်နေသည်။
”ကျွီ” မိမိလန့်သွားပြီး နောက်လှည့်ကြည့်မိလိုက်သည်။မိမိ အလောတကြီး ဝင်လာခဲ့လို့ သေချာမပိတ်မိသော တံခါးက လှုပ်ခါနေသည်။ မိမိ အပြေးသွားလို့ တံခါးကို သေချာ ပိတ်လိုက်သည်။ထတ်ခနဲဖြစ်သွားသော ရင်ကို အသာဖိရင်း လူက အားမရှိချင်သလိုဖြစ်လာသည်။ ရေကို အကြာကြီးစိမ်ချိုးပစ်လိုက်ချင်ပေမယ့် တနေကုန် ရေထဲမှာနေခဲ့ရတာမို့ ခပ်မြန်မြန်ချိုးပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့သည်။အပြင်ရောက်တော့ ဖုန်းက အဝင်ခေါ များ ဝင်ထားတာတွေ့သည်။ကို့ဆီကပဲ။မတ်ဆေ့ခ်ျလည်း ပို့ထားသည်။ ”သဲ ကိုတို့ မိုးချုပ်သွားလို့ ပြန်လာလို့မရတော့ဘူး စက်လှေတွေ မသွားတော့ဘူး ဟိုမှာပဲနေပြီး မနက်မှ ပြန်လာမယ် ကို့ကိုစိတ်ချနော် စိတ်မပူနဲ့ ကိုပြည့်လည်း ကိုယ် ဖုန်းဆက်ထားတယ် မကြောက်နဲ့နော် ချစ်တယ် အာဘွား” ဖတ်ပြီးနောက် မိမိ တကိုယ်လုံး တုန်ရီမှု များ ဖြစ်လာပြန်သည်။သူနဲ့ တညလုံး အတူတူ ဆိုသည့်စိတ်ကြောင့် မိမိ ဘာလုပ်ရမည်မသိဖြစ်နေသည်။မိမိ အဝတ်အစား လဲ ပြီးခဏ ကိုပြည့်ရောက်လာသည်။
”သဲ ဟိုကောင် ဖုန်းဆက်သေးလား” ”အင်း အကို အဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ စောစောပြန်ပါ့မယ်လို့” ကိုပြည့်က မိမိအနီး ဝင်ထိုင်ရင်း ပြောသည်။ ”အရင်တုန်းက ပြဿနာမရှိဘူးသဲရ ဒီညနေ မိုးသားလေးတွေလည်း တက်လို့ နေပါလိမ့်မယ် စိတ်မပူပါနဲ့ အကိုလည်းရှိသားပဲ” ”ဟုတ်အကို” ကိုပြည့်ရဲ့ မျက်လုံးများက တမျိုး အရောင်လက်နေသည်ကို မိမိခံစားမိသည်။အတူတူ ညစာဆင်းစား တီဗွီ ထိုင်ကြည့်သည်အထိ ထူးထူးခြားခြား စကားမပြောမိ။အိပ်ကြတော့ မိမိ ခုတင် က မီးမှိန်လေး ဖွင့်ထားပေမယ့် သူဘက်ကတော့ မီးပိတ်ထားလို့ မှောင်မဲနေသည်။ ဟိုဘက်လှိမ့် ဒီဘက်လှိမ့်နဲ့ ဘယ်လိုမှ အိပ်မပျော်။ဟိုဘက်ခုတင်ဆီမှလည်း တိတ်ဆိတ်လို့နေသည်။တစ်ခုခုကို တောင့်တနေသလိုလို စိုးရွံ့ နေသလိုလို နှင့်။မိမိ ဆီးသွားချင်လာလို့ ခုတင်ပေါ်မှ အသာထပြီး အိမ်သာဝင်သည်။အိမ်သာမှ အထွက် ”အမေ့” ရုတ်တရက် တံခါးအဝမှာ ရပ်ကြည့်နေသော ကိုပြည့် ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ကိုပြည့်က ချက်ချင်းဆိုသလို မိမိ မျက်နှာကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းများနှင့် အတင်းဖိကပ်လိုက်သည်။မျက်လုံးများပြာဝေသွားပြီး အတင်းရုန်းသော်လည်း အချည်းနှီးသာ။သူအတင်း နမ်းပြီးတော့ မျက်နှာခွာလိုက်သည်။ ”ဖျန်း ဖျန်း” မိမိ ရီဝေသည့်ကြားမှ သူ့ပါးကို နှစ်ချက်ဆင့်ရိုက်လိုက်သည်။ပြီးတော့ တုန်ရီ လှိုက်မောစွာ နှင့် ဆို့တက်လာသော ရင်ကို သူ့ဆီတိုးကပ်လို့ သူ့နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူလိုက်မိသည်။မိမိခေါင်းထဲတွင် ဆန္ဒ တစ်ခုမှ လွဲ၍ ကျန်တာ သတိမထားမိတော့။သူက အလိုက်သင့် မိမိအနမ်းတွေကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်သည်။သူ့လက်တွေက ခန္ဓာတလျှောက်ပြေးလွှားဖြစ်ညှစ်နေသည်။ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသော သူ့ကျောပြင်ကို အတင်း ဖက်တွယ်ထားမိသည်။မိမိကိုယ်လေး လေပေါ်မြောက်တက်သွားပြီး နွေးထွေးသော မွေ့ယာဆီ ကျောချမိသည်အထိ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို အားပါးတရ နမ်းနေမိတုန်းပင်။ သူက အင်္ကျီကြယ်သီးများဖြုတ်၍ လှန်ချလိုက်ပြီးနောက် ဘော်လီ နောက်ချိတ်ကိုပါ ဖြုတ်ပစ်သည်။
ပြီးတော့ မိမိ ရင်သားများကို အတင်း ဖြစ်ညှစ်နေတော့သည်။သူ့အနမ်းတွေက ပါးပြင် လည်ပင်းမှတဆင့် ရင်သားများကိုစုပ်ဆွဲလာသည်။ ”ဟင်းးး” သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မိမိေါင်နှစ်ဖက်က ဘေးသို့ ကားသွား ပြီး မာတောင့်တောင့် အသားဆိုင်တစ်ခုက အင်္ဂါတလျှောက် ပွတ်ဆွဲနေသည်။ ”ဟင်းးးးး” ”အားးး” သူ့ရင်ဘတ်ကို အတင်းတိုးနေမိသော်လည်း သူကတော့ ခပ်မှန်မှန်ပင် လှုပ်ရှားနေသည်။ ”အားး ကောင်းလိုက်တာ သဲရယ်” သူက မိမိနားလေးကို ကိုက်၍ တိုးတိုးလေးပြောသည်။မိမိနားထဲမှာ အင်္ဂါစပ်ကို လာထိခိုက်သော တဖတ်ဖတ် အသံတွေကို ကြားနေရသည်။တိုးတိုးလေးသာညည်းညူမိရင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ချထားမိသည်။သူက ကိုယ်ချင်းကပ်ထားရာမှ ခွာလိုက်ပြီး မိမိဒူးနှစ်ဖက်ကို ရင်ဘတ်အထိ တွန်းကပ်၍ ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားတော့သည်။သူ့လက်တွေကို ကိုင်ထားမိတော့သည်။ဘယ်တုန်းကနှင့်မှမတူသော တင်းကျပ်မှုကို ခံစားနေရသော်လည်း။
ထို အတွေ့ကို မိမိကိုယ်တိုင် အသက်ရှူအောင့်ထားလောက်အောင် လိုချင်နေမိသည်။ ”အင့် အင်း အင်း အင်း အင်းး” ”အာ့ အား အားး” ခုတင်လေးက ရော မိမိခန္ဓာပါ အပေါ်သို့ တွန်းတွန်းတက်သွားသည်။သူက ပေါင်တဖက်ကို လွှတ်လိုက်ပြီး နောက် ပေါင်တစ်ဖက်ကို ပုခုံးပေါ်လွှဲတင်လိုက်တော့ ဘေးတစောင်းလေးဖြစ်သွားသည်။ပေါင်တစ်ခုလုံးကို ပွတ်သပ် နမ်းရှိုက်ပြီး လှုပ်ရှားတော့ မိမိမျက်လုံးများမဖွင့်နိုင်တော့ပါ။ ကြာလာတော့ မိမိ တကိုယ်လုံးချွေးစေးလေးများထွက်လာသည်။ ”ကိုယ် ပြီးတော့မှာမို့လို့ မှောက်လိုက်ကွာနော်” သူကပြောပြောဆိုဆို ခါးမှ ကိုင်၍ ဆွဲ လှည့်လိုက်ပြီး မိမိဗိုက်လေးကို စီးခုံစပ်မှ နှိုက်၍ ပင့်တင်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ခေါင်းအုံးထိုးထည့်လိုက်ပြီး သူ့ဟာ တေ့၍ လှုပ်ရှားတော့သည်။ မိမိမျက်နှာကို မွေ့ယာပေါ် ဘေးစောင်းချထားရင်း လက်များက အိပ်ယာခင်းကို တင်းတင်း ဆုပ်ထားမိသည်။ ”အားအား အားအား ” မိမိ ခါးလေးကို ကိုင်၍ အားကုန် ဆောင့်နေရာ။
မိမိ ပိုနာကျင်သလို ဖြစ်မိသော်လည်း ဟာသွားမှာကို စိုးနေမိသည်။ဆန္ဒ တစ်ခုက တဖြေးဖြေးမြင့်တက်လာချိန် မကြာခင်မှာပင် မိမိတကိုယ်လုံး ကျင်တက်သွားပြီး သူ့ကိုယ်လုံးကြီးက မိမိအပေါ် မှောက်ကျလာသည်။ ”အားးးးးးးး”’အားးးးးးးး” တကိုယ်လုံး အင်အားများမရှိတော့ သလို ဘေးသို့ လှဲချလိုက်မိသည်။သူက သူ့ဟာကို မထုတ်သေးပဲ ထပ်ရက်ပင် မိမိကို နောက်မှ သိုင်းဖက်ထားသည်။အခုအချိန်မှာ မိမိ ကို့ကိုရော တခြားဘာကိုမှ ပင် သတိမရနိုင်တော့ပါ။ ခဏလောက်ငြိမ်နေပြီးတော့မှ ”ချွတ်လိုက်တော့လေ ဒီမှာ ချွေးတွေချည်းပဲ” ”အင်း” သူအသာခွာလိုက်တော့မှ မိမိရေချိုးခန်းထဲသို့ ပြေးဝင်လိုက်မိသည်။ ရေပန်းဖွင့်ပြီး ရေအောက်သို့ အမြန် တိုးဝင်လိုက်တော့မှ ရင်တုန်ခြင်းတွေ အနည်းငယ် ပြေသွားသလိုရှိသည်။ ”အင် ဘာလို့ဝင်လာတာလဲ” ကိုပြည့်က နောက်မှ လိုက်လာပြီး ရေပန်းအောက်အတင်းတိုးဝင်၍ မိမိကို ပွေ့ဖက်လာသည်။မိမိ အလိုက်သင့်ပင်။မရုန်းမိတော့။
”တော်လောက်ပြီ ထင်တယ် အကို” ”အကို့စိတ်တွေ ထိန်းမရနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် သဲရယ်” သူက ရေပန်း ခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်သည်။ရေစက်လက် မိမိ ခေါင်းလေးကို ဆုပ်ကိုင်လို့ နှုတ်ခမ်းတွေကို အတင်း စုပ်ယူလာတော့သည်။မိမိ ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားမိသော်လည်း နှုတ်ခမ်းလေးများ ဟပေးထားမိသည်။တဖြေးဖြေးနှင့် နံရံနှင့် ကျောကပ်သည်အထိ သူအတင်း စုပ်ဆွဲနေသည်။မိမိပါးတွေ လည်ပင်းတွေ ရင်ညွန့်တွေနှင့် ရင်သားတွေကို သူ့လက်တွေက ပွတ်သပ်နေသည်။ ပြီးတော့ နို့ခေါင်းလေးတဖက်ကို စုပ်နမ်းလိုက်ပြန်သည်။ ”အာ့ အကို တော်ပြီ” နောက်ဆုံးတော့ ခုတင် ပေါ်သို့နောက်တခေါက် ရောက်သွားပြန်သည်။ဒီတခါတော့ ကိုပြည့် ခုနကလောက် မကြမ်းတော့ပါ။ခုတင်ပေါ်လက်ထောက်ထားသည့် သူ့ လက်မောင်းကျစ်ကျစ်နှစ်ဖက်ကို ကိုင်ရင်း တစ်ချက်ချင်းပုံမှန် ဆောင့်နေသော သူ့ကို ရီဝေစွာ ကြည့်နေမိသည်။ဖတ် ခနဲ ရိုက်ခတ်သံနှင့်အတူ အပေါ်သို့ တွန်းတွန်းတက်သွားသော မိမိရင်သားတွေကို သူ တက်မက်စွာ ကြည့်နေသည်။
တဖြည်းဖြည်း ဆောင့်ချက်တွေက အားပါလာသည်။စေ့စော်ချက် တစ်ခုခု ကြောင့်လားမသိ။သူ့လည်ပင်းကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို အားပါးတရ စုပ်နမ်းလိုက်မိသည်။ပြီးတော့ သူ့ပုခုံးတွေ ကို တင်းတင်းဖက်ထားမိသည်။အလိုက်သိစွာ သူ့လျှာက အတင်းရစ်ပတ်လာသည်။ ”အင်း ဟင်းးး” တိတ်ဆိတ်သော ညဝယ် အသံမျိုးစုံကြားနေရသည်။ ”သဲ အပေါ်တက် ကွာနော်” ပက်လက်လှန်လိုက်သော အခါ ထောင်မတ်နေသော အချောင်းကြီးကို မီးမှိန်မှန်ကြားမှ တွေ့လိုက်ရသည်။သူ့အပေါ်ခွထိုင်လိုက်ပြီး အသာ လက်ဖြင့် ကိုင်လို့ မိမိ အင်္ဂါကို တေ့ထည့်လိုက်သည်။ ”အားးးး” နင့်ခနဲဝင်လာသော အရာကို ဒီအတိုင်းထားရင်း သူ့ရင်ဘတ်အပေါ် လက်ထောက်၍ ပြန်ကြွ လိုက်သည်။ပြန်အထွက်မှာ ပွတ်တိုက်ထွက်သွားသော သူ့ဟာကို ညစ်ဆွဲထားရင်း ဖြေးဖြေးချင်း အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးနေမိသည်။ ”အားးးးး ကောင်းလိုက်တာ သဲရယ်” သူက မိမိရင်သားတွေကို လက်ဖြင့် ဆွဲညှစ်ထားသည်။
နောက်တော့ မိမိမျက်လုံးများမှိတ်ထားလိုက်ပြီး အတင်း ဆောင့်ပေးလိုက်မိတော့သည်။ ”အားးး ဟားးး ဟားးး” ဘယ်တုန်းကမျှမရဘူးသော သာယာသော အတွေ့အောက်မှာမျောပါရင်း သူ့အလိုကျဖြစ်မိသည်။ဒုတိယ တစ်ခေါက်ဆိုတော့ ပိုကြာလို့ မိမိလည်း ပျော့ခွေသွားသည်။ဘယ်လို အိပ်ပျော်သွားသည်ပင် မသိလိုက်။မနက်လင်းလို့ ကို တို့ရောက်လာသည်အထိ အိပ်ယာထဲ ခွေနေမိသည်။ကို့ဆီက လာနေပြီ ဆိုပြီး ဖုန်း ဝင်လာတော့မှ ကိုပြည့်ကို အတင်းနိုးလို့ ခုတင်ပြောင်းခိုင်းရသည်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ရေချိုး အဝတ်လည်းပြီးသည့်တိုင် နုံးသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် ပြန်လှဲနေလိုက်သည်။ ”သဲ ပြောရရင် ကိုယ့်အပြစ်တွေပါပဲ ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့ မပြောဘူး ဟိုကောင်ပြန်လာရင် အားလုံး ကို သဲ ဖွင့်ပြောလိုက် အားလုံး ကိုယ်ခံယူမယ်” အဝတ်တွေလဲရင်း ကိုပြည့်ပြောသော်လည်း မိမိ သူ့ကို လှည့်မကြည့်မိပါ။မကြည့်ချင်လို့ သူ့ကို စိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်မှန်းတော့ မိမိကိုယ်တိုင်သိနေသည်။
တကယ်ဆို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မှားခဲ့သည် မဟုတ်လား။အဲသလို သူများကို အပြစ်ဖို့ရလောက်အောင်လည်း မိမိ မျက်နှာမပူပဲ မနေနိုင်ပါ။ လူကနုံးနေသည့်အပြင် စိတ်ပါ ပင်ပန်းလာတာမို့ တွေးရင်းနှင့် မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားသည်။ ”သဲ နေမကောင်းဘူးလား” ”အင်” ကိုအသံကြားရပြီး ခုတင်လေးလှုပ်သွားသည်။ ”ကောင်းပါတယ် အိပ်ချင်လို့ ညက အိပ်မပျော်ဘူးလေ” ပြောလိုက်ပြီးမှ အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုး ဖြစ်သွားမည်စိုး၍ ”တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေလို့ ဟင်း ဟင်း” ဟိုဘက်မှာလည်း နှစ်ယောက် ဘာတွေ တွတ်တွတ် တွတ်တွတ် ပြောနေမှန်းမသိ။ ”လာထလေ ကိုယ် မုန့်ဟင်းခါးဝယ်လာတယ် စားရအောင်” ကိုပြည့်က မိမိကို တချက် တချက် ကြည့်နေပေမယ့် မိမိကတော့ တတ်နိုင်သလောက် အဆင်ပြေပြေနေနိုင်အောင်ကြိုးစားသည်။ ဒီနေ့တော့ သုံးရက်မြောက်မို့ ထွေထွေထူးထူး ဘယ်မှ သွားစရာ မရှိလို့ ကမ်းခြေမှာပင် ဆော့ဖြစ်သည်။ မိမိ ကိုပြည့် နှင့် သီးခြားမဖြစ်အောင်နေသည်။
မိမိတို့ဒိထက်ပို၍ မမှားသင့်တော့ပါ။ကိုကတော့ အရင်အတိုင်းပင် မိမိကို အရမ်း ဂရုစိုက်သည်။တစ်နေကုန် နေစောင်းသည်အထိတော့ မကစားနိုင်ပါ။မိမိ နှင့် ကို တို့ အရင် တက်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲရောက်လို့ ကိုက နှီးနှောကြဖို့ အစပြုလာသည့်တိုင် မိမိက စိတ်များ ပင်ပန်းနေ၍လားမသိ။စိတ်မပါ ပါ။ကိုက လည်း အလိုလိုက်ပါသည်။ရေချိုးပြီး မိုးချုပ်မှ ကမ်းခြေသို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်။ကမ်းခြေ ပြန်ရောက်သည်အထိ ကိုပြည့်တို့ အတွဲကို မတွေ့မိသေးပါ။ လသာရက်မို့ သာသာရှိသောလရိပ်အောက်မှာ တဖွေးဖွေးတက်လာသည့် ရေလှိုင်းကလေးများကို ကြည့်ရင်း ကို့ခါးလေးဖက်၍ လမ်းလျှောက်မိသည်။စိတ်တွေက ပြန်လည် လန်းဆန်းလာသလို မိမိ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဟု မှတ်နိုင်လာသည်။နောက်ကျိနေသော ခေါင်းထဲမှ စိုးရွံ့မှုများက ပင်လယ်ရေ ထဲ မျောပါသွားသလို။ကိုနှင့်အတူ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ကြည့်ရင်း ခေါင်းလေးကို ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်ထားမိသည်။
”အေးတယ် သဲ ပြန်ရအောင်နော်” ”ဟင့်အင်း ခနနေရအောင် ကိုယ်ရယ် မနက်ဖြန် ပြန်ရမှာပဲ သဲ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ကြည့်ချင်သေးတယ်” အတော်ညဥ့်နက်မှ ပြန်ဖြစ်သည်။တံခါးစေ့ထားရုံပဲမို့ အသာဖွင့်၍ ဝင်လိုက်သည်။ ”ဟာ” ”အို” ကိုပြည့်တို့ အတွဲ ခုတင်ပေါ်မှာ လုံးထွေးနေကြသည်။ဆုက ကိုပြည့် ကို အတင်းဖက်ထားပြီး ခြေထောက် နှစ်ဖက်က ခါးကို ချိတ်ထားသည်။မမြင်ချင်ပါဘူးဆိုမှ အဝင်အထွက် ပြင်းပြင်း တဖတ်ဖတ် နှင့် လှုပ်ရှားနေသော ကိုပြည့် အောက်ပိုင်းဆီ အကြည့်တွေ ရောက်သွားပြန်တော့ မိမိ မျက်နှာလေး ရဲတက်သွားသည်။ရှက်၍ ငုံ့ထားမိနေသော မိမိကို ကိုက ရင်ခွင်ထဲထည့်လိုက်ပြီး ခုတင် ပေါ်ဆွဲလှဲချလိုက်၏။ ”အို ကို ” ”ကိုယ်မရတော့ဘူးကွာ” ”ရှက်စရာကြီး ကိုရယ် သူများတွေလည်းရှိတယ်” မိမိစကား မဆုံးပါ။ကိုက ဘောင်းဘီကို အတင်း ဆွဲချွတ်နေသည်။ဒီတစ်ခါ ကြည့်နေကြသူတွေက ကိုပြည့်တို့ အတွဲပါ။အမှတ်တမဲ့ ကိုပြည့်နှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံခိုက် သူ့အကြည့်တွေက ရီဝေလို့နေသည်။
မိမိ ရှက်လွန်းလို့ မျက်လုံးများမှိတ်ထားသည်။အောက်ပိုင်း ပြောင်သလင်းခါသွားတော့မှ ကိုက မျက်နှာအပ်၍နမ်းပါတော့သည်။ ”အား ကိုရယ် ဟားးးး” ကိုယ့်ခေါင်းလေးကို ကိုင်ထားရုံ ကိုင်ထားမိသည်။ကို့လျှာက အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားတွေထိ တိုးဝှေ့လို့နေသည်။လက်တွေကလည်း ရင်သားတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှ ပင် ဖျစ်ညှစ်လို့နေပြန်သည်။ ”ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်” ဟိုဘက် ခုတင်မှလည်း အသံတွေကြားနေရသည်။ မှိတ်တချက် ဖွင့်တချက် မျက်လုံးများမှတဆင့် မြင်နေရသည်က ကိုပြည့် အကြည့်တွေက မိမိဆီ တစ်ခါတစ်ခါ ရောက်လာနေသလိုပင်။ ကိုက မိမိအင်္ကျီကို လှန်တင်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာ လေးပါ ပင့်တင်လို့ ရင်သားထိပ်လေးတွေကို ကစားပေးနေတော့ ခါးလေးပါ ကော့တက်မိသည်။ ”အင်း ကို ယားတယ်” ”အားးးးး” သိပ်မကြာခင်မှာ ကို့မျက်နှာ မိမိအင်္ဂါလေးဆီမှ ခွါလိုက်တော့ ကို့နှုတ်ခမ်းတဝိုက် စိုစွတ်လို့နေသည်။ကို သူ့အဝတ်အစားတွေ အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။
ပြီးတော့ မိမိကို ဆွဲထူလို့ အပေါ်အင်္ကျီနှင့် ဘရာစီယာ ကို ခွာသည်။ပြီးတော့ မိမိကို လှန်ချလိုက်ပြီး အချောင်းကြီး တရမ်းရမ်းနှင့် မိမိအပေါ်ခွထိုင်ကာ…. ”သဲ စုပ်ပေးကွာ” ”ရှက်စရာကြီး ကို ရယ်” ”ကိုကြတော့ မရှက်ရဘူး ဟိုမှာ သူများတွေ ကြည့်ဦး” ကိုပြလို့ မိမိ ကြည့်မိတော့ ဆုရယ် ပက်လက်လှန်နေသော ကိုပြည့်အပေါ် တက်ထိုင်၍ ခေါင်းက အချောင်းကြီးအပေါ် နှိမ့်ချည် မြင့်ချည် လုပ်နေသည်။ကိုပြည့်ကတော့ တအင်းအင်းနှင့် ခေါင်းက ဟိုရမ်း ဒီရမ်း ဖြစ်နေသည်။မိမိရင်ထဲဝယ် လှိုက်ခနဲ တပ်မက်မှု တစ်ခုက တိုးဝင်လာသည်။ ကိုက မိမိမေးစေ့လေး အသာ ပင့်မလို့ သူ့ဟာကို နှုတ်ခမ်းဖျားလာတေ့သည်။မိမိလက်များ သူ့ ခါးကို အသာကိုင်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေး ဟပေးလိုက်မိသည်။ကိုက ဆံပင်ဖျားလေးတွေ အသာပင့်တင့်လို့ ခေါင်းလေးကို ကိုင်၍ ဆက်ထိုးထည့်သည်။ ”အားးး” မိမိလည်ချောင်းနားအထိ ရောက်တော့မှ သူဆွဲထုတ်သည်။
ဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ် လုပ်နေချိန် မိမိလက်တွေက သူ့ဥလေးတွေကို ဖျစ်ပေးမိသည်။”အွန်း” ”အား ကောင်းလိုက်တာ သဲရယ်” ကို အတင်းတော့ မလုပ်ပါ။ဖြေးဖြေးချင်း ပဲ မိမိခေါင်းကို ကိုင်၍ လှုပ်ရှားသည်။ခဏကြာတော့မိမိ အသက်ရှူကျပ်လာ၍ အတင်းတွန်းထုတ်လိုက်သည်။ ”အရည်တွေ ရွှဲနေတာပဲ” ”တော်ပါ အရှက်မရှိ ဟင် ဘာလုပ်တာလဲ ဟာ” ကိုက ပြောပြောဆိုဆို မိမိ ရင်သားနှစ်ဘက်ကို စုကိုင်ပြီး သူ့ဟာထည့်၍ ပွတ်ဆွဲနေသည်။ ”သုတ်တာလေ” ”လုပ်ရင်လည်း လုပ်တော့ကိုရယ်” မိမိ တောင်းဆိုလိုက်မိသည်။ဝေဒနာတခုက တရိပ်ရိပ် တက်လာသည်လေ။ဟိုဘက်ကို အသာစောင်းငဲ့ ကြည့်မိတော့ ဆုက ကိုပြည့်အပေါ်မှ နေ၍ တက်မက်စွာ ဆောင့်ပေးနေသည်။ရင်သားတွေ လှုပ်ခါနေတာကို ကြည့်ပြီး မိမိအဖြစ်ကို ပြန်သတိရသွားလို့ ကြက်သီးလေးတွေ ထသွားမိသည်။ ”သဲ ကုန်းပေးကွာ နော်” ကို အရမ်းတက်ကြွနေသည်။
မိမိအသာလေး နောက်လှည့်ပေးလိုက်တော့ သူက ခုတင်အောက် ဆင်း မတ်တပ်ရက်ပြီး မိမိကို ခုတင်အစပ်ထိ ဆွဲယူသည်။”အင်းးး” တနင့်နင့်ဝင်လာသော အတွေ့ကို မိမိ တက်မက်စွာ ခံယူသည်။ သိပ်မကြာခင် အဆက်မပြတ်ဝင်လာသည့် ဆောင်ချက်တွေက မိမိကို ရှေ့သို့ ယိုင်ယိုင်သွားစေသည်။ ”အား အား အား အား” ကိုက မိမိ ခါးလေးကို ကိုင်၍ အားကုန် ဆောင့်နေသည်။ခုတင်ပေါ် ထောက်ထားသည့် မိမိလက်တွေကို နောက်ဘက်သို့ ဆွဲယူလိုက်တော့ လေထဲမှာတွဲလောင်းဖြစ်သွားသော မိမိကိုယ်လုံးလေး တုန်ခါနေသည်။ကိုက အရမ်း စိတ်လာနေတော့ မိမိရင်သားတွေ ဖျစ်ညစ်ပြီး ဆောင့်နေတုန်းမှာပင် တဗျစ်ဗျစ်နှင့် မိမိအင်္ဂါထဲ ပူနွေးမှုများ စီးဝင်လာသည်။မိမိ လည်း ခုတင်ပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ်ကျသွားသည်။နုံးချိနေသည့်ကြားမှ ဟိုဘက်ခုတင် အကြည့်ရောက်မိတော့ ဘယ်တုန်းကပြီးသွားသည်ပင်မသိလိုက်။နှစ်ယောက်သား ဖက်လျက်အိပ်ပျော်နေသည်။
ကိုက ခုတင်ပေါ်တက်လာ၍ မိမိကို ထွေးပွေ့ထားသည်။ ”ချစ်တယ် သဲရယ်” ”တော်ပါ အရှက်မရှိ” ကို့ကို အလိုက်သင့် ပြန် ပွေ့ဖက်ထားမိသည်။မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားပေမယ့် မပီဝိုးတဝါးအိပ်မက်တွေကြောင့် နိုးလာရသည်။စည်းချက်ညီစွာ နိမ့်ချည် မြင့်ချည်ဖြစ်နေသော ကိုယ့် ရင်ဘတ်ပေါ်မှ လက်ကလေးအသာဖယ်လို့ ကိုယ်ကို စောင်းလိုက်မိသည်။ ညဦးပိုင်းက အမှတ်မထင်ပဲ ရင်ခုန်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် မိမိတုန်ရီ နုံးချိစွာ ခွေနေမိသည်။ကိုပြည့် ၏ ရမ္မက်အပြည့်ပါသော အကြည့်တွေ ကို့ရဲ့ တပ်မက်မှုတွေ ကြားမှာ မိမိ ဘယ်လိုနေရမှန်းပင်မသိခဲ့ပါ။ပြီးတော့ ဆုရဲ့ ကာမအပေါ် ခုံမင်မှုတွေ။ပြီးသွားမှာပါလေ။မနက်ဖြန် ပြန်ကြတဲ့အခါ အားလုံပြီးသွားမှာပေါ့။တကယ်ဆို ဒါတွေဟာ အမှတ်တရ လေးတွေပဲပေါ့။ လူးလွန့်ရင်းနဲ့ ဆီးသွားချင်လာလို့ အသာထ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေသော ကိုယ်ကို ခေါင်းရင်းဘက် ဗီရို ပေါ်ရှိ သဘက်ကြီးထယူခြုံ၍ အိမ်သာဘက်ထွက်ခဲ့သည်။
အိမ်သာမှ ပြန်အထွက် ရုတ်တရက် မီးပိတ်သွားပြီး စွေ့ခနဲ ပွေ့ယူခံလိုက်ရလို့ လန့်အော်မိသည်။ ”အို အမေ့” လက်တဖက်က မိမိပါးစပ်ကို လာအုပ်လို့ အတွင်းဘက်သို့ဆွဲခေါ်သွားတာ မိမိကျော နံရံ၌ ကပ်သည်အထိပင်။ဘာဖြစ်မှန်းမိမိ သိလိုက်၏ …. ”အကို ဘာလုပ်တာလဲ ကိုတို့ သိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” ”ရှူး” အမှောင်ထဲမှ မျက်ဝန်းတစ်စုံက မိမိကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေသည်။ ”သဲ ဘာလို့ ဖွင့်မပြောလိုက်တာလဲ ကိုယ့်အပြစ်တွေ ကိုယ်သိတယ်” ”မပြောရက်ဘူးအကို ဆု ဘယ်လိုနေမလဲ ဆု က ညီမ အချစ်ဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်းပါ ညီမရော ကို့ကို ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ တကယ်ဆို အရင်ကတည်းက အကို ထိန်းခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်” ”သိလား အကို ထိန်းမရခဲ့ဘူး ညီမကို မြင်ရင် အကို စိတ်မထိန်းနိုင်ဘူး ညကလည်း” ”အို အကို တော်ပါတော့ ရှက်စရာကိစ္စတွေ” အဝတ်မဲ့ ခန္ဓာတစ်ခုက မိမ်ကို ပိုပြီး တင်းကျပ်စွာ ဖိကပ်လာသည်။ လေမှုတ်သံ ခပ်ပြင်းပြင်းတွေက မိမိမျက်နှာနားမှာ ရစ်ဝဲလို့နေသည်။
”တော်ပြီ အကို ညီမတို့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး သဘောထားမယ် အကိုလည်း ရန်ကုန်ရောက်ရင် ညီမကို သီးသန့်တွေ့ဖို့ ထပ်မကြိုးစားပါနဲ့တော့” မိမိ ရုန်းကြည့်မိသော်လည်း အတင်း ဖက်ထားလို့ အချည်းနှီး ဖြစ်နေသည်။ ”ဒီမယ် သဲ ကိုယ် ကတိပေးတယ် ကိုယ် မရ ရအောင် ထိန်းမယ်ကွာ ဆု ကိုလည်း ကိုယ်ချစ်တာပေါ့ ချစ်လို့ယူထားတာပေါ့ ဒါပေမယ့်ကွာ အခုတော့ ” ကိုပြည့်ရယ် မိမိ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းလိုက်တော့သည်။မိမိနှုတ်ခမ်းများကိုတင်းတင်းစေ့၍ ရုန်းနေမိသည်။အငမ်းမရ နမ်းနေသောသူ့ လျှာ၏ အတွေ့တွေကြောင့် မိမိ ရီဝေလို့လာပြန်သည်။မိမိ လက်များက သူ့ပုခုံးကို ဖက်လိုက်မိချိန်မှာတော့ ပတ်ထားသည့် မိမိသဘက်လည်းကွာကျသွားသလို သူ့လက်တွေကလည်း တကိုယ်လုံးအပေါ် ပွတ်သပ်လာသည်။ ”တော်ပြီ အကိုရယ်” ပြောနေပေမယ့် စကားတွေ မပီသတော့သည်ကို မိမိကိုယ်တိုင်သိနေလေပါတော့လေသည်….ပြီးပါပြီ။